Raadinta dhageysto qaar music wanaagsan? Xataa waxaad ka fiirsan kartaa iibsashada offline CD ee. Iyada oo laga yaabaa in aad rabto in aad kaliya ku amri music online, amro CD offline waxay leedahay faa'iidooyin gaar ah aad. Halkan waxa aad ku arki.
1. Music dukaanka USA:
2. Dukaanka Music Australia
3. Dukaanka Music UK
4. Dukaanka Music Kanada
5. Dukaanka Music Germany
Faa'iidooyinka CD iibsashada ka offline dukaanka CD:
Helitaanka Instant: Waa in aad CD ka helaan dagdag ah oo ka eegi kartaa xaaladda guud counter ah. Xataa waxaad ka dalban kartaa ciyaaro dukaanka ka hor siday isku si ay guriga.
Qiimaha gaarka ah u taraynin: dukaanka ayaa laga yaabaa inay dalab qiimaha gaarka ah ee maalinta iyo aad u tarayo iyadoo wax dhibaato ah.
Lagala kulmo ugu fiican: Haddii aad tahay buff a music laga yaabaa in aad had iyo jeer jeclaan lahaa in ay soo iibsato CD gaar ah ama laba maalintii la bilaabay. Dukaanka halkaas oo aad si joogta ah u booqan kuu diyaarin karnaa in aad u! Ka sokow, dukaamada caadiga ah ha macaamiisha ay si joogto ah wax ka ogaado dalabyo gaar ah. Waxaad lacag kaash karaa dalabyada noocaas ah sida ay laguugu sahlo.
Bal aynu eegno deg deg ah oo ku saabsan dukaamada CD ah oo adduunka ah.
Dukaanka 1. Music USA:
Sida mid ka mid ah ka dib markii xarumaha ganacsi ee ugu dooneen adduunka, USA sida ganacsatada kale ee aad u xoojisa horumarka mihnadaada music ah. Sababta oo ah dakhliga sare la tuuro oo ka mid ah muwaadiniinta Mareykanka iyo awoodda wax iibsiga ee dollar ee dhaqaalaha adduunka USA waa meel ganacsi ugu horeeya ee loogu tala galay oo dhan. Tani ayaa gebi ahaanba shaqeeyay yaab ah ee koritaanka offline halkaas dukaamada CD u hagaagsan oo dukaamada online .
Dukaanka Music San Antonio,
San Antonio waa magaalada ugu dadka badan toddobaad ee USA oo ay tahay magaalada labaad ee ugu dadka badan ee Texas. Oo kali ah 3.5% ka mid ah ay ku nool yahay shaqo la'aan. Tani waxay si kale loo dhigo oo curinaysa suuqa weyn CD-yada. Magaaladu waxay kaamil ah sawirka uu leeyahay fannaaniin caan ah oo badan iyo sidoo kale dukaamada muusigga ah.
1.Sam Ash Music Dukaamada
Dukaanka 2. Music Australia:
Music uu leeyahay meel gaar ah ee Australia. Waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah dukaamada CD offline weyn ee magaalooyinka sida Melbourne, Perth, Brisbane iyo Sydney.
5.Vintage Record in Annandale
3. Music dukaanka UK:
UK waxay leedahay qaar ka mid ah dukaamada music weyn ku faafay magaalooyinka waaweyn ka badan;
3. Music Dawsons
4. Music dukaanka Canada:
Kanada waa quruun ee qaybta waqooyi ee North America iyo waxaa lagu dhafay in music iyo dhaqanka.
Dukaanka Music Toronto:
Toronto waa caasimadda gobolka oo ah magaalada ugu weyn ee Kanada. Qaar ka mid ah dukaamada muusigga iibiya weyn CD-yada waxay kala yihiin:
1. Steve ee Music Store
5. Music dukaanka Germany:
Taariikh Germany ayaa meel gaarka ah; sidaas tagaa la music ah quruuntaas. Qaar ka mid ah music caanka qabaneysa jiraan:
> Resource > Music > iibso CD-ka CD Store offline